Hey’adda Culumada Soomaaliyeed Oo Bayaan Ka Soo Saartay Xaaladda dalka Marayo
Muqdisho:-Hey’adda Culumada Soomaaliyeed ayaa maanta bayaan ka soo saartay xaalada murugeysan oo uu dalka marayo waxaana nuqul ka mid ah Bayaan uu soo gaaray Halgan.net Bayaanka Hey’adda Culumada Soomaaliyeed ayaa waxaa uu u qornaa sidan Bayaanka Hoos ka Akhriso
5 comments on “Hey’adda Culumada Soomaaliyeed Oo Bayaan Ka Soo Saartay Xaaladda dalka Marayo”
abdinasir on December 21, 2011 at 6:08 am said:
Ilaahay xaqa hayna wada waafajiyo
duco qabayaal on December 19, 2011 at 11:44 pm said:
aslaamu-caleykum. wan wax lagu farxo bayaankaan culimadana. lana maqlo wanaageena ayeey jecelyahiin horumarkeney donayaa walaalayaa hubka dhiga oo awaamirta u hogaansama insha-allah alle inaga dulqaadi dono culeyska nalagu hayo, hadaad dad islaam ah tahiin wadaada maqla,,,
bashir on December 19, 2011 at 10:14 pm said:
CULUMADA WAXAAN KA SUGEYNAA WAX QABAD HADAL WAX MATARO. IYO QORAAL,
WAXAAN KA SUGEYNAA BADIILKI SHABABKA.
axmeed on December 19, 2011 at 8:40 pm said:
Culimada	waa in la adeeco ilayn eyagaa diinta yaqaanee, nebigu scw wuxuu wax ku xalin jiray wada hadal. Islaamkuna wuxuu kor ku noqonayaa wada hadal, iyo amaankoo laga shaqeeyo
biixi on December 19, 2011 at 3:40 pm said:
ASC waxay culimadu soo jeediyeen illaahay haxiftiyee talooyin dhaxal gal ah oo umadu ku bad baadayso walaalayaal culimada hala maqlo oo dhagaa haloofuro waxay ku baaqayaan iyo waxay diidayaan hadii kale dhibkaa laga biximaayo illaahaw culimada noo ilaali oo cadawgooda jebe aamiin yaarabi
Leave a Reply to abdinasir Cancel reply